China Yakamisikidzwa Warehouse System vagadziri uye vanotengesa | IVEN
Iyo AS / RS system inowanzo ine zvikamu zvinoverengeka seRack system, WMS software, WCS chikamu chikamu chikamu uye nezvimwe.
Inotambirwa zvakanyanya mune yakawanda mishonga uye yekugadzira chikafu munda.
AS / RS (Otomatiki Kuchengetedza Kudzoreredza Sisitimu)
Zvoga dura hurongwa
Iyo yekuchengetera manejimendi sisitimu (WMS) isoftware uye maitiro anobvumidza masangano kudzora nekugadzirisa mashandiro ekuchengetera kubva panguva iyo zvinhu kana zvinhu zvinopinda mudura kudzamara zvabuda. Kushanda mune yekuchengetera kunosanganisira manejimendi ekugadzirisa, kutora matanho uye kuongorora.
Semuenzaniso, iyo WMS inogona kupa kuoneka mune yesangano hesera chero nguva uye nzvimbo, kungave mune chivakwa kana mukufamba. Inogona zvakare kugadzirisa mashandiro emaketani kubva kumugadziri kana wekutengesa kune yekuchengetera, wozoenda kumutengesi kana nzvimbo yekuparadzira. IWMS inowanzo shandiswa padivi kana kubatanidzwa neyekufambisa manejimendi system (TMS) kana yeinventory management system.
-Kunyange WMS iri yakaoma uye inodhura kuitisa uye kumhanya, masangano anowana mabhenefiti anogona kupembedza kuomarara uye mutengo.
-Kushandisa WMS kunogona kubatsira sangano kudzikisa mutengo wevashandi, kugadzirisa kunyatso kujeka, kugadzirisa kushanduka uye kupindura, kudzikisira zvikanganiso mukutora nekutumira zvinhu, uye kugadzirisa basa revatengi. Yemazuva ano imba yekuchengetera manejimendi masisitimu anoshanda neicho chaicho-nguva dhata, ichibvumira iyo sangano kubata irwo razvino ruzivo pane zviitiko senge maodha, kutumirwa, mareti uye chero kufamba kwezvinhu.
Pashure: Mishonga uye Medical Sekondari Kurongedza Mhinduro
Zvadaro: Sirasi Kushambidza Kuzadza Capping Machine
Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Disposable Syringe & Tsono Production Line, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Ampoule Machine À Coudre Singer, Ampoule Muchina À Coudre Led,